Farriinta degdega ah ee bini'aadminimada-ka timid shinni shaqaale ah - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
"Rabshadaha la'aantu waa xoog ka yimaada gudaha marka aad u beddesho dareenka gooni-gooni ee xiriirka. U gal bulsho ay shinnidu jeceshahay.”
(Lagu soo diray Xarunta Metta ee Rabshadaha La'aanta, Ogosto 2, 2021)
By: Kooxda Xarunta Metta
Carqaladeynta cimiladu waa bani-aadmigu sabab u yahay iyo, in kasta oo ay adag tahay in la qiro qaar ka mid ah, waxaan qaadan karnaa hab rajo leh: haddii aan sababnay, wax ayaan ka qabaneynaa. Haddaba maxaa jidkayaga soo galay? Mudaaharaadku ma ku filnaan doonaa? Iyada oo loo marayo muraayadaha kakan ee Buzz, shinni shaqaale ah oo ku taal rug agtaada ah, waxaan si gaar ah u leenahay aragtida gudaha iyo cod naadir ah oo la maqlo - mid ka bixiya aragtiyo ka imanaya Dhulka Hooyo iyo makhluuqaadkeeda sida loo xalliyo dhibaatadayada, iyo sida rabshad la'aantu ay tahay inay tahay door muhiim ah ciyaara. Sida Martin Luther King, Jr. uu caanka ku yahay, kuweenu waa wakhti "rabsho la'aan ama jiritaan la'aan." Haddaba, kee baan dooran doonnaa?
animationn gaaban (oo leh farshaxan iyo animation by Anabella Meijer iyo Tim Witte) waxaa la abuuray iyadoo maskaxda lagu hayo da'da 12-18 si loo fududeeyo doodaha ku saabsan rabshad la'aanta iyo caqabadaha ay la kulmaan khalkhalka cimilada.
Qoraalka ayaa laga heli karaa halkan.
Qorshaha Casharka by Xarunta Metta
Dhammaanteen waxan ku wada jirnaa: Run-to-Life Stories si loo dhiirigaliyo Waxqabadka Cimilada Hal-abuurka, by Rivera Sun ee Xarunta Metta
# isbedelka cimilada
October 25, 2020 CV, Democracy, Warar & Muuqaal 1
Waa waqtigii iskuuladu ay bari lahaayeen cimilada iyo dhibaatooyinka cilmiga deegaanka (UK)
February 29, 2020 Warar & Muuqaal 0
Nidaamka maanta ee iskuulada UK wuxuu udiyaariyaa ardayda mustaqbal aan si fudud u jirin. Fashilkan aan caadiga aheyn wuxuu dhalinyarada u horseeday inay iskood isu abaabulaan oo ay dalbadaan waxbarasho ku saleysan iskuul oo qiraya kana jawaabaya caqabada qeexeysa noloshooda: dhibaatada cimilada. [sii wad akhriska…]
Wac Codsiyada: 2020 Jennings Randolph Senior Fellowship Competition - USIP
March 8, 2020 Fursadaha maalgelinta, Jobs 0
Jennings Randolph Senior Fellows waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta iyo hormarinta aqoonta, aaladaha dhisidda nabadda iyo talooyinka siyaasadeed ee ku aaddan istiraatiijiyad wax ku ool ah oo dheeraad ah, siyaasad iyo barnaamijyo dhisaya nabad waarta Taariikhda diiwaangelinta ee la qabtay: Maarso 18. [sii wad akhriska…]